U dir emayl adoo adeegsanaya SMTP WordPress adoo wata Microsoft 365, Live, Outlook, ama Hotmail | Martech Zone
Haddii aad ordeyso WordPress maaddaama nidaamkaaga maaraynta maareynta, nidaamka sida caadiga ah loo qaabeeyey inuu riixo farriimaha emaylka (sida fariimaha nidaamka, xusuusinta ereyga, iwm) iyada oo loo marayo martidaada. Si kastaba ha noqotee, tani maahan xal lagu talin karo dhowr sababood awgood:
Qaar ka mid ah marti-geliyeyaasha ayaa dhab ahaantii xakameynaya awoodda ay uga soo diri karaan emayllada ka baxsan server-ka si aysan u bartilmaameed u ahayn haakarisku inay ku darsadaan khayaanada emayllada diraya.
Iimaylka ka imanaya adeegahaaga sida caadiga ah lama xaqiijin oo lagu ansixiyo hababka xaqiijinta samatabbixinta emaylka sida SPF or DKIM. Taasi waxay ka dhigan tahay iimayladan waxaa laga yaabaa in si toos ah loogu wareejiyo galka qashinka.
Ma lihid diiwaanka dhammaan emayllada dibadda loo soo diray ee laga riixay server -kaaga. Iyaga oo ku soo diraya adiga Microsoft 365, Live, Muuqaalka, ama Hotmail koontadaada, waxaad ku hayn doontaa dhammaantood galkaaga la soo diray - si aad dib ugu eegi karto farriimaha goobtaadu dirayso.
Xalka, dabcan, waa in la rakibo plugin SMTP ah oo emaylkaaga ka soo dira koontadaada Microsoft halkii laga riixi lahaa server -kaaga. Intaa waxaa dheer, waxaan kugula talinayaa inaad sameysato a koonto isticmaalaha Microsoft oo gooni ah kaliya isgaarsiintaan. Habkan, uma baahnid inaad ka walwasho dib -u -dejinta sirta oo curyaamin doonta kartida dirista.
Ma rabtaa inaad sameysato Gmail bedelkeed? Guji Halkaan
Easy WP SMTP Plugin WordPress
Liistadeena plug-ka WordPress ugu wanaagsan, waxaan ku taxnaa SMTP WP fudud plugin xal u ah isku xirka bartaada WordPress iyo serverka SMTP si loo xaqiijiyo loona diro emayllada baxaya. Way fududahay in la isticmaalo oo xitaa waxaa ku jira tabkeeda tijaabada ah ee dirista emaylka!
Dejinta loogu talagalay Microsoft waa quruxsan fudud:
Waxay ubaahantahay SSL: Haa
Wuxuu ubaahan yahay TLS: Haa
Waxay ubaahantahay xaqiijin: Haa
Dekedda SSL: 587
Waa tan sida ay u eegto mid ka mid ah macaamiishayda, Royal Spa (Uma soo bandhigo beeraha magaca isticmaalaha iyo erayga sirta):
U dir emayl Imtixaan WIth Plugin WP SMTP ee fudud
Ku dhaji furaha sirta ah ee la abuuray Easy WP SMTP oo si sax ah ayuu u xaqiijin doonaa. Tijaabi emayl, waadna arki doontaa in loo diray:
Hadda waxaad geli kartaa koontadaada Microsoft, tag galka Sent, oo arag in farriintaada la diray!
Tags: DMRCfudud wp smtpgaarsiinta emaylkahotmailLivemicrosoft 365Odoroskaboostada phpdir emaylSMTPplugin smtpCiidanka Booliiska SoomaaliyeedWordPressemaylka qoraalkaplugin WordPress
10 -ka Xubnood ee Wax -ku -oolnimada leh, Ku -hawlan Nuqul Farriin Email ah